कोरोनाविरुद्धको १० लाख मात्रा खोप आज काठमाडौँ आइपुग्यो, अब क–कस्ले लगाउन पाउँछ ? - योहोखबर
कोरोनाविरुद्धको १० लाख मात्रा खोप आज काठमाडौँ आइपुग्यो, अब क–कस्ले लगाउन पाउँछ ?
काठमाडौँ – कोरोना भाइरसविरुद्धको १० लाख डोज कोभिशिल्ड खोप काठमाडौँ आइपुगेको छ । भारतको नयाँ दिल्लीबाट एयर इन्डिया विमानमार्फत १० लाख डोज खोप काठमाडौँ आइपुगेको हो । विज्ञले पनि अरु देशको भन्दा भारतमा बनेको खोप प्रभाव कारी नै रहेको बताउछन् ।
सरकारले खरिद गरेको १० लाख मात्रा कोभिसिल्ड खोप लामो समयको रस्सकाकस्सीपछि काठमाडौँ आइपुगको छ । भारतको नयाँ दिल्लीबाट दिउँसोे एयर इन्डिया विमानमार्फत खोप काठमाडौँ विमानस्थल उत्रिएको हो । यही फागुन ५ गते नेपाल सरकारले सेरम इन्स्टिच्युट अफ इण्डियासँग २० लाख डोज खरिदका लागि सम्झौता गरेको थियो ।
सरकारले प्रति डोज ४ डलरमा २० लाख डोज खरिद गरेको खोप पहिलो चरणमा १० लाख डोज मात्र आज आएको हो । यो खोप टेकुस्थित कोल्डरुममा भण्डारण गरी प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयबाट देशभरका खोप केन्द्रमा वितरण गरिने छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो खोप सुरक्षित रहेको कारणले गर्दा ढुक्क भएर सबै खोप लगाउन आग्रह गरेको छ ।
खोप आएसँगै ५५ वर्षभन्दा माथि उमेर समूहलाई खोप लगाउन लागिएको छ । यस्तै सार्वजनिक यातायातका चालक, सहचालक तथा विश्वविद्यालय र विद्यालयका शिक्षकले पनि खोप लगाउन पाउने छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य संस्थाले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा क्रमिक रूपमा खोप उपलब्ध गराउने सरकारको भनाइ छ । विज्ञ पनि भारतमा बनेको यो खोपले नेपालमा नकारात्मक असर नगर्नेमा विश्वस्त छन् ।
यसअघि गत माघ ८ गते भारत सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको सोही खोप आएको थियो । सरकारले पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मी, सफाइमा संलग्नहरूलाई खोप लगाइएको छ । यस्तै दोस्रो चरणमा पत्रकार तथा कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई पनि खोप लगाइएको थियो ।
हिमाल आरोहण खुला, कतिले चढ्लान सगरमाथा ?